Haala Sochii Ummata Oromoo Oromiyaa Ammaaf Sochii Qeerroo Bilisummaa Oromoof Adeemsa Harcaatota Wayyaanee. ( Qalbeessaa Dhangi’aatiin) – nama barri miite.
nama barri miite.
Haala Sochii Ummata Oromoo Oromiyaa Ammaaf Sochii Qeerroo Bilisummaa Oromoof Adeemsa Harcaatota Wayyaanee. ( Qalbeessaa Dhangi’aatiin)
Haala Sochii Uummata Oromoo Oromiyaa Ammaaf Sochii Qeerroo Bilisummaa Oromoof Adeemsa Harcaatoota Wayyaanee.
Bilisummaan saba tokkoo mirkanaa’uuf aarsaawwaan gurguddaa kaffaluun dirqama qabsoon namatti laatudha. Aarsaan qabsoo keessatti baafamu aarsaa tolaa akka hintaaneef qabsaa’oonni daandii haqaa qabatanii uummaata isaanii walaboomsuuf carraaqaan haxxummaa diinaa irratti baruun wal hubachiisaa adeemuun barbaachiisa. Uummanni Oromoon kaleessa du’aa tire, reebamaa hidhamaa ture. Har’as sanumaaf. Ta’us ajjeechaan, hidhaan kamuu duubdeebii qabsoo utuu hintaane uummaata banbansee qabsoo fuulduratti dhiibaa jira. Qabsoon akka nama Qurxummii waadee nyaatuu eeggannoo gaafata. Namni Qurxummii nyaatu eeggataa, haanxaa ykn lafee ishee keessaa ilaalaa nyaachuu baannan, laagaa waraanuun hinhafu. Laagaa waranamtee, kokkeetti haanxaan Qurxummii si qabattee jiraachuun waa danda’amaaree? Namni qabsoo gaggeessuus diina gidduu akka jiraataa jiru dagaggamaaf agachu hinqabu. Isaaniin mil’ataa adeemuun jireenya lubbuusaa cinatti jireenya qabsoo egereef murteessaadha. Haala keessa jiru daawaachaa adeemuun kallattii bahaaf galmaa isaaf karaa saaqa. Karaa Itti jirru karaa boochoo karaa asphaaltii nutti fakkaatuu hinqabu. Bu’aa ba’ii, karaa diilloo ayyaan ilaallattootaaf diilloon halagaa irra guute; karaa gufuuf gufata baay’atu irra adeemaa jirra. Sanaaf karaa qulqulleessuun daandii Bilisummaa uummaataaf baafame sana haalaan bareechaa adeemuun barbaachisaadha.
A, Haala Sochii Uummaata Oromoo Oromiyaa Keessaa
Uummaanni keenya saatii kamuu uummaata ogeessa, uummaata bilchaataadha. Bilchinni uummaata hedduu fagaateera. Har’a warra aangoo qabna biyya bulchina jedhan irra uummatatu wal bulchuu, wal gaggeessuu danda’a. Har’a qabna”ogummaa siyyaasaa barannee qabna” ofiin jedhan irra uummatatu siyyaasa beeka. Siyyaasa bahaaf galma isaa hubachuun uummataa, jabina qabsaa’otaaf akkasuma mogolee ta’uufitti jira. Har’a uummanni dubbii dabballoota wayyaanee alalchee ilaaluu danda’eera. Akka kaleessaa sobuunii biyya bituun dadhabameera.
Har’a siyyaasa bitanii siyyaasaan uummata bituun matumaa hindanda’amu. Uummannuu isaan olitti siyyaasaan qancareera. Isaan olitti siyyaasaan fagaateera. Isaan olitti siyyaasa hordofuuf bakka laateera. Uummanni Kenya kaleessaa jechuun uummanni Kenya bara xaaliyaanii, uummata Keenya har’ati. Gootummaan uummata Oromoo kaleessaa har’as jabinumaan jira. Kaleessa basaasaa Xaliyaanii ykn Baandaa guurtuu oduu. Kanneen faranjiif oduu geessitu qadada Gonbisaa jala naqee gubaa tureera. Har’as uummanni wal hidhee basaasaa Wayyaanee kanneen dhiifama uummata isaaniif hingodhin, kanneen naatoo dhala namaa hinqabneef gatii kaffalaa jira.
Gartuun maqaa OPDOtiin Wayyaanee uummatatti finceessaa ofii bashannanee jiraatu, uummatni qooqobbii irra kaahuu eegaleera. Kanneen kaan immoo du’aan adabuus jalqabeera. Kun cimina uummata keenyaati. Har’a akka argan Oromoo bituun, akka argan ajjeesuun hindanda’amu. Har’a akka kaleessaa ABO arrabsanii akka argan abaaranii uummata waanjoo garbummaa jalatti dhidhiibuun, dhiiga xinnaaf guddaan qaama dhiqatanii socho’uun hindanda’amu. Uummatatu bofa of keessa teesisaa hinjiru. Uummatatu of bulchuu barbaaduutti jira. Uummatatu hoggansa halagaa nuffeera. Uummatatu halagaan bitamuu, saamamuun na gahaa jedhe. Gumaan isa du’ee baafamuu qaba. Shororkeessitoonni isini warra biyya bulchaa jirra jedhudha jechuun yeroo haalaonfatu gahe. Qaamotuma OPDO gara uummataa jiran addaan dhiluun dandaa’amuutti jira. OPDO qabsootti makame makatee, qaamota Wayyaanee keessa hojjetan kanneen aantummaa sabaa qaban manatee qabsoo finiinsuurratti argama. Duuchatti uummanni waan isaaf ta’u addaan baasuurra jira.
B, Sochii Qeerroo Bilisummaa Oromoo Qeerroo Bilisummaa Oromoo
Qabsoo mirga abbaa biyyummaa Oromoo mirkaneessuuf taasisun qaamota uummata keenya dhiiga dhugaa turan, qaamota dhiiga keenya dhuguu dheebotan irratti, qaamota foon keenya beela’an irratti deebifannaa molqa mirga abbaa biyyummaa taasisu jabeessee jira. Qabsoon Qeerroo ammaa firii godhachuuf, daraaraa jalqabetu jira. Daraaraan daraaree firii dhabu jiraaree? Qabsoon Qeerroon itti jirru firii gidhatee uummata keenyaaf soorrata akka ta’u abdii qabna. Kanaaf saatii uummanni keenya golgaa nuuf ta’e kanatti sochiin itti jirru akka hedduu deemaa jiru kamuu quba qaba. Sochiin fincila Xumura garbummaa ammayyuu jabaatee jira. Bakkeewwan hedduun keessattuu Baadiyyaan Oromiyaa mormii jabduurra jira.
Diinni uummataaf OPDO maalirra jiru?
Isaan kun akkuma kaleessaa cidha isaanii haaronfachaa, kontoraata gaa’elaa itti dabalachaa adeemaa jiru. Gaafa ka’an madaa uummataa horfanii yaadannoo duriin uummata garaa raasu, gaafa ka’an ammoo halagaa faana tokkummaa uumna jechuun halagaa jala kurkuraa jiru. Halagaa waliin warra gumaa faana dhiichisaa Abdii illeen dhiiga uummata dhangalaasa. Afaanin gowwomsuu hojii abballummaa hojjechuun wayyaanee suphuurra jiru. Baajetaa wayyaaneen kufte jedhamee dubbatamuun wayyaaneen baajetaa akka hinkufne irratti dalagaas jiru. Maallqaa maqaa buqqaatota Ilmaan Oromoon saamanii wayyaanee ijaaraa jiru. Dabballummaa dhaaba isaaniif gooftaa isaanirraa fudhatan bahataa jiru. Lammaa Magarsaa, Abiyyii Mohammad fi waayillan isaanii Mattuu dabballummaa irratti fuulleffatanii jiru. Uummata ijaaruun of jala hiriirsuuf dirqaama itti kenname bahataa jiru.
Author: nama barri miite
Qabsaa'aniif hin du'an qabsoorraa dheessaniif du'arraa hin oolan! Guyyaan geenyaan duuti hin oolamtu waan ta'eef seenaa dalagii du'i du'a gootaa.	View all posts by nama barri miite
Author nama barri miitePosted on November 9, 2017
Previous Previous post: Qeerroo Bilisummaa Oromoo Madda Walaabuu Irraa
Next Next post: Sadaasa 9 Guyyaa FDG Ilaalchisee Faaruu Hawwisoo Qeerroon
Qabsoo Bilisummaa Oromoo Keessatti Shanee Jechuun Maal Jechuudha? Shaneen Kabajaa Ture, Har’a Maaliif Arrabsoo Fakkaate? Eenyutu Eenyuun Shanee Jedhe? (Moonenus Hundarraatiin) July 7, 2018
Uuummata nagaa irratti lola bananii nagaa biyyaa booressun amala bineensummaa qaban calaqisiisuudha Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo irraa kenname. June 28, 2018
Godina Gujii Keessatti Ummata Oromoo Mirgaa fi Qabeenya Isaa Falmatu Qe’ee Isaa Irratti Rasaasaan Reebuun Falmii Qabsoo Oromoo Daran Dabala Malee Duubatti Hin Deebisu. Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa May 9, 2018
Luucca’uun fakkeessitoota ammaa waanuma eegamaa turedha! (Qalbeessaa Dhangi’aa Irraa) May 5, 2018
nama barri miite. Blog at WordPress.com.